Igcine ukubuyekezwa: May. 15 2019 | 2 imiz ufunde
Ukufuya isilwane kuba ngempela ukuphila izimpilo. Futhi kubo bonke abathandi isilwane laphaya, siyazi ukuthi ungakwazi ezikhona ngempela ngezansi amaqiniso eziyisikhombisa.
Iqiniso #1: “Pet High”
abanikazi Pet ngokuvamile beqiniseka kakhudlwana kuphumele ephakeme ukuzethemba. Pets thanda kwelase, yokubingelela ngenjabulo, futhi afeze isidingo ukwamukelwa, kwakheka “ukuphulula okusezingeni”, okuyinto njengoba umnikazi isilwane, niyazi ukuthi umuzwa asikwazi beat.
Iqiniso #2: Ngini Positive Outlook on Life
Lapho sicabanga nezilwane ezifuyiwe, ungakwazi ukusiza kodwa ukumamatheka ucabange zonke izindlela esingabonisa ngazo basondeze injabulo empilweni yakho. Ngisho nalapho izikhathi ezinzima, ihora-eside enganga futhi play sessions kukhanye usuku lwakho. Eqinisweni lapho ucabangela isilwane sakho, Imicabango ngendlela engalunganga kuphunyuka futhi unethemba obusuka ajikeleze kuwo wonke umzimba wakho.
Iqiniso #3: Lonely No More
Pets futhi usinikeze imizwa wokuzwana futhi asinike ukuphila okunenjongo. Umthwalo wemfanelo futhi umhlatshelo edingekayo kobunikazi pet kuwufanele wonke lapho sibona futhi uzizwe sinemibandela, induduzo bengangigxeki zinikeza.
Iqiniso #4: Vula Towards Life nebudlelwane
The “ukuphulula okusezingeni” ukuthi ezifuywayo wethu asibonise kwenza nokuba abasengozini akamuhle scary. Ngokuba siyazi ukuthi kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, kukhona into ephilayo yathembela kwethu. Through ezifuywayo’ nature onakekelayo futhi udinga uthando lwakhe, weqiniso ukwencika ezifuywayo zisibonisa inikeza ithemba lokuthi bavula kuwufanele ngempela ingozi ngaso sonke isikhathi.
Iqiniso #5: Ukukholelwa Soul Mates
Through kisses okungahleliwe ethangeni-ehlezi kulowo look yokuhlonipha emehlweni abo, uthando olungenamkhawulo ezifuywayo ukuhlinzeka unikeza incazelo entsha kumuntu izwi umphefumulo. Ukuze abathandi bezilwane abathanda, ezifuywayo zethu ungomunye umphefumulo wethu abangane bomshado. By kubo “azi nje” lapho sidinga nye lalelisisa nga extra luqinisekisa ukuthi imiphefumulo yenu ukukhuluma nomunye. Kuyinto lo mqondo wokuthi ezifuywayo ethu asenza evulekile abafanele ukuba lo mbono umphefumulo abangane bomshado.
Iqiniso #6: In Touch nge Emotions
By imizwelo, ukuthi akusho akahlanye okhalayo noma umsindo njalo kwemizwa. Pets ukuphila kwethu anencazelo ejulile ngokuvumela nathi ukuze uthole in touch ethambile, imizwelo obuseduze kakhudlwana. Thina, njengoba abanikazi bezilwane, kukhona elijwayelekile elinomfutho kakhudlwana nokwaziyo baveze imicabango yethu nemizwa hhayi kuphela ezifuywayo zethu kodwa nabanye.
Iqiniso #7: Pets Kuze Kuqala
ezifuywayo Wethu yizingane zethu. Ibhayisikobho njalo ukhuluma ngabo ekusindiseni izinkulungwane isilwane izithombe ukuze sibanikeze esemancane, ubuhlobo phakathi kwethu nezilwane sethu siyefana kakhulu ukuthi umzali nengane.